U-Eric Schmidt ushiya isikhundla se-CEO kwi-Alphabet (Google) | Iindaba zeGajethi
Oonobumba abahambanga kwinto yonke, okwangoku yeyona nkampani inamandla kwiinkonzo ze-Intanethi emhlabeni, kwaye iya kuhlala injalo ixesha elide enkosi kumacandelo ayo amaninzi (uGoogle, Android, iDrive ...). Ngapha koko, ekuqaleni yonke le nto yehla yaya kuGoogle, kodwa imithetho yokunqanda ukurhweba eMelika yanyanzelisa inkampani ukuba yahlulwe yangamacandelo phantsi kwematriki ebizwa ngokuba yiAlfabhethi.
Yiba nokuba kunjalo, ngaphambili kuyo yonke into yayiyintsomi U-Eric Schmidt, i-CEO kaGoogle osebenzise i-iPhone, indoda eye yazenzela iinkonzo ze-intanethi kwihlabathi liphela. Nantsi ke indlela yokwenziwa kwentsomi, kwaye emva kweminyaka elishumi elinesixhenxe e-helm ethatha isigqibo sokuya ecaleni.
Ukusukela ngo-2001 sasinoEric ophethe uGoogle kunye namacandelo ayo, kodwa ngokungathi yayijongwa njengezizukulwane ezitsha, uSchmidt uthathe isigqibo sokushiya ecaleni kwiAlfabhethi kwaye ukusukela ngoku azibeke njengomcebisi omnye ngaphakathi kwinkampani, esebenza ngokwe kuye ukuphucula isayensi, itekhnoloji kunye nobubele, yenye yezona zinto zinamandla. Ngale ndlela, umlingisi ophambili kwimpumelelo yeshumi leminyaka elidlulileyo nguGoogle uba lilizwi lokumamela hayi ingalo elawulayo.
Emva kweminyaka elishumi njenge-CEO kunye neminyaka esixhenxe njengoSihlalo weSigqeba, andinakulinda ukuba nditshone kwizinto zamva nje kwezenzululwazi, kwitekhnoloji, nakububele. Ndijonge ukusebenza noLarry noSergey kwikamva lethu apha kwiAlfabhethi. https://t.co/nVnZqMEHoI
-Eric Schmidt (@ericschmidt) Disemba 21, 2017
Yena kunye noonobumba kwiblogi yakhe bagqibe kwelokuba bangashiyi igumbi lokudideka kwaye baxelele ukuba loluphi olu tshintsho malunga nomgaqo-nkqubo wegunya lenkampani. Ukuvutha okunjalo kunokuchaphazela ixabiso lentengiso kunye nokuzithemba kwabatyali mali, kwaye yiyo loo nto Kwiinkampani zetekhnoloji kolu luhlu, i-CEO lixabiso elongeziweyo, njengoko kwenzekileyo ngemihla yakhe noSteve Jobs eApple. Okwangoku, umntu oza kungena ezihlangwini zenkampani enkulu "G" akaziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » U-Eric Schmidt uyehla njenge-CEO kwiAlfabhethi (Google)
Ukubheja kweQualcomm kwikhaya eliqhagamshelwe elingcono enkosi kumnatha wonxibelelwano